Suuqgeynta, naqshadeynta websaydhka iyo saadaalinta sumadda ee 2018 | Abuurista khadka tooska ah
Saadaalinta suuq geynta, naqshadeynta websaydhka iyo sumadeynta sanadka 2018
Melissa Perrotta | | Dhiirrigelinta
Isbeddelada ku jira moodooyinka ganacsiga in aan aragnay tobannaankii sano ee la soo dhaafay waxay u horseedday shirkadaha inay dib uga fikiraan habka ay ula macaamilayaan macaamiisha. Sidan oo kale, waxaan ku aragnay shirkadaha hogaaminaya sida Unilever, DeWalt iyo Lego oo xoojinaya xiriirka macaamiishooda. Kaliya maahan kaliya bixinta alaabooyinka ka jawaabaya isticmaalaha ayaa u baahan hab guud. Taabadalkeed isticmaaleyaasha waa in hadda lagu daraa habka naqshadeynta sida abuurayaal.
Sababtaas awgeed hadda in ka badan sidii hore ayaa lagama maarmaan ah in la fuliyo falanqaynta xilliyada habka aan ula dhaqmayno isticmaalaha. Dareenkan, waxaan sameynay saadaalin ku saabsan arrimaha aasaasiga ah si loo tixgeliyo markii la qorsheynayay inta lagu jiro 2018.
1 Shakhsiyeyn iyo shaqsiyeyn badan
2 Codka ayaa amar qaata
3 Google waxay sii wadi doontaa xulashada kaliya waxyaabaha ugufiican
4 Sheeko sheeko
5 Fiidiyowyada meel walba
Shakhsiyeyn iyo shaqsiyeyn badan
Wow, boggan ayaa iga aqoon badan hooyaday! Taasi waa muujinta aan dooneyno inaan ku abuurno adeegsadeyaashayada. Waxay ku saabsan tahay macaamilka awood u leh inuu helo a waayo-aragnimo ku habboon baahiyahaaga. Si tan loo sameeyo, magacyadu waxay raadiyaan macluumaad iyagoo isbarbardhigaya danahooda, waxyaabaha ay jecel yihiin, waxyaabaha ay jecel yihiin, iwm. Tan awgeed waxay u adeegsadaan nidaamyo falanqeynaya xogta iyagoo cabbiraya astaamahooda nafsaaniga ah. In kasta oo qaabeynta noocan ahi ay jirtay in muddo ah, horumarinta teknoolojiyada iyo kobaca aqoonta barnaamijku waxay suurtogal ka dhigeysaa in laga sii gudbo. Qiyaas inaad awoodo inaad siiso isticmaale kasta a waxyaabaha gaarka ah gaar ahaan shaqsi kasta soo jiidasho leh. Sidan oo kale, waxaan suurtagal noqon doonnaa inaan ku aragno bogagga midabbada kala duwan sida ku xiran isticmaale kasta.
Codka ayaa amar qaata
Sannadkii 2017 waxaan aragnay dhammaan dukaamada oo buuxinaya amarrada codka sida Siri, Alexa, iyo Google Home. Iyadoo la hagaajiyay sirdoon macmal ah aaladahaan gadaashooda waxaa jira hal wado oo kaliya oo suurtagal ah. Laga bilaabo hadda, suuqleyda iyo shirkaduhu waxay rabaan inay bilaabaan inay dadaalkooda u huraan abuuritaanka waxyaabaha la xiriira tikniyoolajiyadan. Naqshadayaashu waa inay xiiseeyaan maaddaama aan ka horreyno a hoos u dhaca muuqaalka muuqaalka dhijitaalka ah ee aadaya mid maqal ah.
Ka soo qaad in mustaqbalka aan fogayn aad awoodi doontid inaad iibsato duullimaad adigoo si fudud ugu sheegaya Siri ama Alexa inay kuu soo iibsadaan, intaad cashada karinayso.
Google waxay sii wadi doontaa xulashada kaliya waxyaabaha ugufiican
Kobaca degdegga ah ee nidaamyada ku saleysan AI ayaa horseeday hagaajinta nidaamyada ay adeegsadaan matoorada raadinta. Waa inaan si gaar ah u feejignaano hadda maadaama Google ay maalgalisay balaayiin doolar si loo horumariyo Alphabeth Inc. Kani waa mashiin raadin oo adeegsada teknolojiyadda ugu sareysa ee lagu fuliyo raadinta ku saleysan aqoonsiga muuqaalka muuqaalka iyo aqoonsiga codka. Qaabkan, sida uu sheegay Sundar Pichai, madaxa shirkadda Google; waxaan ka hor mari doonnaa marxalad ay farshaxanku na dhagaystaan, na eegaan oo ay nala falgalaan.
Laakiin waa maxay dhibaatada taas? Si nidaamyadan ay u shaqeyn karaan u baahan doonaa xaalad la xakameeyo. Markaa haddii aan dooneyno inaan hadda la xiriirno in ka badan sidii hore waa inaan hubinnaa in waxyaabahayagu ay buuxinayaan dhammaan heerarka Google iyo qeexitaannada, ama waxaa laga yaabaa inaan ugu yeerno Eye of Mordor? Runta ayaa ah muhiimada ay leedahay Mawqifka SEO, nuxurka iyo hagaajinta ayaa sii wadi doona inay sii kordhaan.
Kala duwanaanshaha badan ee alaabada iyo noocyada aan aragno maanta way fududahay in lagu dhex lumo badweynta dalabyada. Mar dambe kuma filna in alaab lagu bixiyo qayb gaar ah. Hadda waa lagama maarmaan in isticmaalaha ayaa dareemaya in la aqoonsaday leh badeecada ama sumadda aan soo jeedineyno. Tan awgeed, aaladda ugu fiican ee aan haysano ayaa ah sheeko-sheeko Tani waa istiraatiijiyad awood leh oo ah in noocyada ugu fiican ay adeegsadeen sannado. Abuuritaanka sheeko ayaa ku caawin doonta abaabulo macaamilka marka waan awoodaa u damqasho sheyga iyo sumadda. Sidan oo kale, waxaad dareemi doontaa in lagu maqlay, la fahmay laakiin waxaas oo dhan ka sarreeya, oo la aqoonsaday. Hadana hadaan u noqono tuduca kowaad oo aan ku nidhi naqshadayntu waxay isku dayeysaa inay fahanto isticmaalaha, markaa sumad muujinaysa inay fahanto waxay ku dambayn doontaa helitaanka qiime iyo aqoonsi ka sii weyn.
Fiidiyowyada meel walba
Horey ayaa loo ogaa in waxyaabo badan oo fiidiyowgu kujiro fiidiyowga ay u yimaadeen inay qabsadaan meel xiddigle marxaladda naqshadeynta. Sannadkan waxay lagama maarmaan u tahay calaamadaha inay soo saaraan content firfircoon si ay u noolaadaan. Sababta tani waa koritaanka dhagaystayaasha oo leh feejignaan gaaban. Dareenkan, inkasta oo aan arki doonno raadinta codka oo koraysa, waa inaan soo saarnaa waxyaabo ka duwan kala duwanaanta goobta dhijitaalka ah ee macluumaadka lagu xardhay. Xulashada ugu fiican waa in la abuuro waxyaabaha ku jira fiidiyow ee ugu yeeraya macaamilka inuu is dhexgalo, tusaale ahaan muujinta sheekooyinka macaamiisha kale ama muujinta gadaasha muuqaalka astaanta.
Marka hadda oo aad haysatid furayaal qaar ka mid ah isbeddelada suuqgeynta ee sanadkan uu keeni doono, u adeegso. Waxay bilaabeysaa inay naqshadeyso badeecadaha iyo adeegyada aragti leh ka caawinta hagaajinta tayada nolosha dadka isticmaala.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Saadaalinta suuq geynta, naqshadeynta websaydhka iyo sumadeynta sanadka 2018
Arturo Fernando Najera dijo
Waad salaaman tahay Melisa.
Farxad ayey ii tahay inaan kula kulmo, waxaan xiiseynayaa qaabeynta bogga, oo loogu talagalay Urur Bulsho Bulsho. Ujeedada ayaa ah in lagu hormariyo Ciyaaraha gaar ahaan Sayniska Ciyaaraha. Waxaan horey u haystay domainka.
Waxaad sidoo kale aadi kartaa Veterinaria Dr. Nájera oo aad talo i siisaa.
Jawaab Arturo Fernando Nájera
Melissa Perrotta dijo
Galab wanaagsan Arturo! Waxaan kuu soo diray emayl
Jawaab Melisa Perrotta
Adobe Illustrator tabaha iyo toobiyeyaasha laga yaabo inaadan aqoon
Tirooyinka Renaissance ayaa dib loogu soo celiyay tilmaamyo waqtiyadan casriga ah